“အရေးပေါ်ကားမှန်သော်လည်း ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်လို့ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ခဲ့သော်…” – စွယ်စုံသုတ
“အရေးပေါ်ကားမှန်သော်လည်း ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်လို့ ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ခဲ့သော်…”
ယာဉ်မောင်းဆိုကထဲက ယာဉ်မောင်းတို့လိုက်နာရမဲ့ကျင့်ဝတ်တွေ အလိုလိုအပြည့်အဝရှိသွားပါပြီ။လူကြီးကားပဲမောင်းမောင်း နာရေးကားပဲမောင်းမောင်းရဲကားပဲမောင်းမောင်း စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မ်ိရင်တော့ အများနည်းတူအရေးယူခံရမှာပဲ
ရှင်းစရာရှိတာရှင်း လျော်စရာရှိတာလျော်လို့ ထောင်ကျစရာရှိကျကိုကျမှာပဲ။ငါမောင်းတဲ့ကားက ဘာကား ညာကားရယ်ဆိုပီးသီးခြားအထူးခံစားခွင့်ရယ်လို့မရှိပါဘူး
ဒါကြောင့် မင်းမလိုက်နာရင် မင်းခံရမှာပဲ.
သူငယ်ချင်းမင်းသိလားပရဟိတကားတွေ နာရေးကားတွေ မီးပွိုင့်မှာမီးနီဖြတ်လို့ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရင်ယာဉ်/လမ်းစည်းကမ်းချိုးဖေါက်လို့ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရင်..သူတို့လဲအများနည်းတူ အရေးယူခံရမှာပါ
မှန်ပါတယ် အခြားယာဉ်တွေက အဲ့ဒီလိုအရေးပေါ်ယာဉ်တွေကို ဦးစားပေးရမှာဟုတ်တယ် ဒါကိုအားလုံးသိတယ်….ဒါကဦးစားပေးရမည့်ယာဉ်မို့ ဦးစားပေးတာလေယာဉ်စည်းကမ်းကယာဉ်းစည်းကမ်းပဲ
တခြားစီ တကန့်စီလေ.တချို့လူနာတင်ကားတွေ အန်းဗျူးလင့်တွေအရေးကြီးလို့ဆိုပီး အရမ်းမောင်းတယ်..အရေးပေါ်လူနာပါလို့ဥသြသံဆွဲတယ်..တချို့က လူနာမပါလဲ ဥသြသံဆွဲတယ်
ဝါယာလက်တွေလဲဖွင့်ထားတယ်…အရေးကြီးလို့မီးနီဖြတ်တာ ဖြတ်လို့ရတယ်…အဲ့ဒီလိုအတွေးတွေနဲ့မောင်းရင် မှားပါလိမ့်မယ်..ဦးစားပေးရမှာမှန်ပေမဲ့ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ကြည့်ပါလား…အများနည်းတူ အရေးယူခံရမှာပါပဲ
ဒါကြောင့် သီခြားအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့တော့ အမှတ်မမှားနဲ့သူငယ်ချင်း..မသာကားမောင်းမောင်း ဆရာ့ကားမောင်းမောင်း တို့တွေယာယာဉ်မောင်းဖြစ်ပီဆိုကထဲက
ယာဉ်/လမ်းစည်းကမ်းတွေအားလုံး ငါတို့နဲ့သက်ဆိုင်ပီမို့ လိုက်နာကြရအောင်သူငယ်ချင်း။
ယာဉ်/လမ်းစည်းကမ်းကိုသိစေလို၍ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည် အမှန်တကယ်အရေးပေါ်ကားများအား(မီးသတ်ကားကဲ့သို့) ဥသြဆွဲလာသည်နှင့် ယာဉ်အားလုံးက ဂရုပြုရှောင်းပေးကြသလို တာဝန်ကျတပ်ဖွဲ့ဝင်များ မီးပွိုင့်များမှလည်း အဆင်ပြေအောင် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်
မီးသတ်ကားသည် သာမာန်ချိန်မှာတော့ အများနည်းတူပါ အရေးပေါ်ချိန်မှာတော့ မီးသတ်ကားသည်အုပ်စုဖွဲ့ ထွက်ခွာခြင်းဖြစ်၍ဦးစားပေးရပါမည် အရေးပေါ်ချိန်တွင် သဘောရိုးဖြင့် မီးသတ်ကားဖြင့်ထိမိမှုမှန်သမျှ ဥပဒေကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုခွင့်မရှိစေရဟု ဥပဒေပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်)
“စျေးကွက်တင်ပြီး ရောင်းချနိုင်ဖို့ အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစားနေတဲ့ အောင်မြင်လုဆဲဆဲ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး (၁၁) မျိုး အကြောင်း”
“မြန်မာနဲ့ ထိုင်း ဘာလို့ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာခြားနေလဲ ? (သိသင့်လို့ ဖတ်ကြည့်ဗျာ)”
သာမည ဆရာေတာ္ႀကီး၏ အမႈအခင္းရွိလွ်င္၊ ပစၥည္းေပ်ာက္လွ်င္...
ဂတ္စ္မီးဖို သုံးရင္ ဖတ္ထားေနာ္ ဂတ္စ္မီးဖို...
ထမင်းကြမ်း၊ ထမင်းကြော် စားတတ်သူများ သတိပြု...
ပင်စိမ်းပင်ကို ဘာ့ကြောင့် အိမ်တိုင်းမှာ...
အမှိုက်လို့ ယူဆပြီး လွှင့်ပြစ်မိနေတဲ့ ကြက်ဥခွံ တွေကို...